Beesha Caalamka oo taageertay Go'aan ay qaateen Puntland & Jubbaland - Awdinle Online
Beesha Caalamka oo taageertay Go’aan ay qaateen Puntland & Jubbaland
Xubnaha Beesha Caalamka ee taageerada siiya Soomaaliya ayaa soo dhaweeyay Magacaabistii Puntland iyo Jubbaland ee Xubnaha Guddiyada doorashooyinka Heer dowlad Goboleed.
Qoraal Wadajir ah oo kasoo baxay Beesha Caalamka ayaa sidoo kale waxaa lagu soo dhaweeyay Shirka deg dega ah oo ay ku baaqeen Madaxweynayaasha Puntland iyo Jubbaland.
Saaxiibada beesha caalamku* waxay soo dhoweynayaan magacaabidda Guddiyada Heer Dowlad Goboleed ee Hirgelinta Doorashada Jubaland iyo Puntland, ee la soo bandhigay 27ka bisha Janaayo. Inkastoo ay soo daahday, tallaabadan wanaagsan waxay gacan ka geysan kartaa abuuridda jawi degdeg loogu hirgeliyo hanaanka doorashada ee heshiiskii 17kii Sebtembar si loo wada dhanyahay oo la isku raacsanyahay.
Previous articleC/raxmaan Cabdi Shakuur oo weerar afka ah ku qaaday Madaxweyne Farmaajo
Next articleMareykanka oo farriin adag u diray Madaxda Dowladda & Dowlad Goboleedyada